Beesha Caalamka oo DF Soomaaliya ka dalbatay 11 qodob oo ku aadan Doorashooyinka Qaranka (AKHRISO) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Beesha Caalamka oo DF Soomaaliya ka dalbatay 11 qodob oo ku aadan...
Beesha Caalamka oo DF Soomaaliya ka dalbatay 11 qodob oo ku aadan Doorashooyinka Qaranka (AKHRISO)
Muqdisho (Halqaran.com) – Beesha Caalamka ayaa waxay go’aan adag ka soo saartay doorashooyinka Qaranka ee 2020/2021 lagu wado inay dalka ka dhacaan, xilli aanay kala cadayn nooca ay doorashadu noqon doonto iyo shaki laga muujinayo in ay dib uga dhacdo waqtigii loogu talagalay.
Beesha Caalamka ayaa soo saartay qodobo la xiriira Doorashooyinka Qaranka, oo Dowladda Somaliya ay tahay in looga baahan yahay inay u hoggaansato, isla-markaana fuliso, si dalka ay uga dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah.
Qodobada Beesha Caalamka ayaa waxaa ugu muhiimsan:
1: In la tixgeliyo Dastuurka.
2: In la xaqiijiyo Doorashada Federalka lagu qabto waqtigii loo qorsheeyay, oo ah dhamaadka 2020=ka ama bilowga 2021da, iyadoo aanay jiri doonin wax muddo kordhin ah ha noqoto Fulinta ama Sharci dejinta.
3: In la xaqiijiyo in dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay helaan wakiilo.
4: In dhammaan shacabka Soomaaliyeed ay awood u helaan inay si toos ah u soo doortaan wakiiladooda, iyadoo doorashaduna noqonayso qof iyo cod.
5: In door ku yeeshaan Xisbiyada Siyaasada Doorashooyinka.
6: In la damaanad qaado ugu yaraan boqolkiiba soddon wakiilo u taagan haweenka.
7: In la suurtageliyo in dhammaan laga qaybgalo, sida dadka gudaha ku barakacay (IDPS).
8: In dhammaan dhinacyada siyaasadda ay wada taageeraan, qaybna ka ahaadaan.
9: In la awoodo suurtagelinta hufnaan iyo ammaanba, si loo soo jiito dhaqaale ku filan.
10: Natiijada soo baxda ay noqotaa mid lagu doorto hoggaamiyeyaal sharciyad haysta, oo ilaalinaya muddo xilleedka Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka.
Beesha caalamka oo go'aan adag ka soo saaray doorashooyinka Qaranka Somaliya